विश्वकपमा नदेखिने चिर्चित ११ खेलाडी, जसको छुट्टै टोली बनाउने हो भने उपाधि जित्न सक्छ ! – Medianp
विश्वकपमा नदेखिने चिर्चित ११ खेलाडी, जसको छुट्टै टोली बनाउने हो भने उपाधि जित्न सक्छ !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २४, २०७५०८:११0
काठमाडौं, २४ चैत । विश्वकप फुटबल सुरु हुन अब ९ दिन मात्रै बाँकी छ । रसियामा हुने विश्वकप नजिकिँदै जाँदा विभिन्न खालका विश्लेष सुरु भइसकेका छन् । सहभागि टिमले अभ्यास स्वरुप मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेका छन् । समर्थकहरु माझ विश्वकपको ज्वरो आइसकेको छ । आफुले समर्थन गरेको टिमले जित्ने दावी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
सामाजिक संजाल देखि चिया पसलसम्म विश्वकपका बहस सुरु भइसकेको छ । यो विश्वकपमा केही नयाँ खेलाडीले डेब्यू गर्नेछन् । क्लब फुटबलमा चम्किएका ती नयाँ प्रतिभाका लागि यो विश्वकपमा पनि प्रभावशाली प्रर्दशन गर्ने अवसर छ । केही खेलाडीका लागि भने यो विश्वकप अन्तिम हुनेछ ।
विश्वकप पछि उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट ‘बुट’ थन्काउनेछन् । तर विश्वका केही चिर्चित स्टार भने यो विश्वकपमा देखिने छैनन् । आज हामी ती स्टारको सूची र विश्वकपको ३३ औं टोली आर्थात बाहिर रहेको टोलीका बारेमा चर्चा गर्नेछौं । ३३ औं टोलीले विश्वकप त खेल्दैन तर यही टोलीलाई खेलाउने भने उपाधि जित्ने क्षमता भने राख्छ ।
गोलकिपरः जन अब्लाक (एथ्लेटिको मड्रिड, स्लोभेनिया)
अब्लाक संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट गोलकिपर मध्ये एक हुन् । उनको राष्ट्रिय टोली स्लोभेनिया विश्वकपमा छनौट हुन सकेनन । स्लोभेनियाले २००२ र २०१० को विश्वकपमा सहभागिता जनाएको थियो । तर दुवै विश्वकपमा समुह चरण पार गर्न भने सकेन । एथ्लेटिको यूरोपा लिगको उपाधि जित्दा उनले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । विश्वकपमा देख्न नपाइने एक उत्कृष्ट खेलाडी उनी पनि हुन् ।
राइट ब्याकः भ्यालेन्सिया (म्यानचेस्टर युनाइटेड, इक्वेडर)
भ्यालेन्सियालाई म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होले नियमित टोलीमा राख्दै आएका छन् । ३२ बर्षिय भ्यालेन्सियाले इक्वेडरका लागि ९२ क्याप खेलेका छन् । २००२, २००६ र २०१४ को विश्वकप खेलेको इक्वेडर रसिया विश्वकपमा भने छनौट हुन सकेन । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौटमा इक्वेडर दश टोलीमा आठौं भएको थियो ।
सेन्टर ब्याकः भर्गिल भानडिजेक (लिभरपुल, नेदरल्याण्ड)
रसिया विश्वकप नेदरल्याण्ड विनाको लगातार दोस्रो प्रमुख अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ । ब्राजिलमा २०१४ मा भएको विश्कपमा तेस्रो भएको नेदरल्याण्ड यूरो कप २०१६ मा समेत छनौट हुन सकेको थिएन । जनवरीमा लिभरपुल गएका डिजेकलाई प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले निरन्तर पहिलो रोजाइमा खेलाउँदै आएका छन् । उनले हालै च्याम्यिन्स लिगको फाइनल खेलेका थिए ।
सेन्टर ब्याकः लियोनार्डो बोनुची (एसी मिलान, इटाली)
बोनुची गत समरमा युभेन्टसबाट एसि मिलान गएका थिए । उनको सरुवाले विश्वफुटलमा निकै चर्चा पाएको थियो । तर उनका लागि यो निर्णय प्रत्युतपादक भयो । युभेन्सले सिरि ए र कोपा इटालियाको उपाधि जित्यो । उनको टोली एसी मिलान भने च्याम्पियन्स लिगमा समेत छनौट हुन सकेन । स्विडेनसँग प्ले अफ हारेपछि इटाली समेत विश्वकपमा छनौट हुन सकेन । जसका कारण उनी पनि विश्वकप बाहिरै रहनेछन् ।
लेफ्ट ब्याकः डेभिड आल्बा (बार्यन म्युनिख, अष्ट्रिया)
अष्ट्रिया विश्वकपमा छनौट हुन सकेन । यूरोपियन क्षेत्रको छनौटमा समुह डी मा रहेको अष्ट्रिया चौथो भएको थियो । तर उसका लेफ्ट ब्यााक डेभिड आल्बाले भने बार्यन म्युनिखबाट उत्कृष्ट खेल पस्कँदै आएका छन् । विश्वकपमा देख्न नपाइने उत्कृष्ट खेलाडीको सूचीमा उनी पनि पर्छन् ।
राइट मिडफिल्डः रिहाद माहारेज (लेस्टर सिटी, अल्जेरिया)
रिहादलाई यो समरमा म्यानचेस्टर सिटीले भित्र्याउने तयारी गरेको छ । उनका लागि लेस्टरले ८० मिलियन पाउण्ड मागेको बताइन्छ । तर सिटी भने ६५ मिलियन मात्रै तिर्न तयार देखिएको । २७ बर्षिय उनले उत्कृष्ट खेल्दै आएका छन् । उनको देश अल्जेरियाले पछिल्ला दुई विश्वकपमा सहभागिता जनाएको थियो । तर यो विश्वकप छनौट चरण पार गर्न सकेन ।
सेन्टर मिडफिल्डः मार्को भेराटी (पेरिस सेन्ट जर्मेन, इटाली)
२५ बर्षिय भेराटी पिएसजीका भरपर्दा मिडफिल्डर हुन् । २०१२ मा पिएसजीमा अनुबन्ध भएका उनले लगातार उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । उनी माथि बार्सिलोना, रियल मड्रिड जस्ता क्लबले आँखा लगाइरहेका छन् । इटाली स्विडेनसँग प्ले अफ हार्दै विश्वकपमा छनौट हुन सकेन । जसका कारण भेराटीको खेल रसिया विश्वकपमा हेर्न पाइदैन ।
लेफ्ट मिडफिल्डः लारोय साने (म्यानचेस्ट सिटी, जर्मनी)
विश्व विजेता जर्मनीले सोमबार रसिया विश्वकपका लागि २३ खेलाडीको सूची सार्वजनिक गर्दा सानेको नाम समावेश थिए । साने जर्मन टिमबाट आउट हुँदा विश्व फुटबलमा हलचल मच्चिएको छ । म्यानचेस्टर सिटीका २२ बर्षिय सानेले यो सिजन सिटीलाई प्रिमियर लिगको उपाधि जिताउन उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । उनले पिएफए योङ प्लेयर अफ द इयरको अवार्ड समेत जितेका थिए । पेप गर्डिओलाको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएका उनी जर्मन टिमबाट आउट भएपछि उनको खेल रसिया विश्वकपमा हेर्न नपाइने भएको हो ।
अट्याकिङ मिडफिल्डः ग्यारेथ बेल (रियल मड्रिड र वेल्स)
वेल्सले २०१६ को यूरो कपमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेको थियो उसले बेल्जियमलाई हराउँदै सनसनीपूर्ण प्रर्दशन गरेको थियो । तर विश्वकपमा भने छनौट हुन सकेन । च्याम्पियन्स लिगको फाइनमा लिभरपुल विरुद्ध उत्कृष्ट दुई गोल गरेका ग्यारेथ बेल विश्वकपमा देखिने छैनन् । उनी अहिले रियल मड्रिड छोड्ने तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ ।
सेन्टर स्ट्राइकरः करिम बेन्जेमा (रियल मड्रिड, फ्रान्स)
बेन्जेमाले २०१५ देखि फ्रान्सबाट खेलेका छैनन् । दुई विवादस्पद ब्लाकमेलसँग जोडिपछि उनी अन्तराष्ट्रिय करिअरबाट बाहिरिएका हुन् । पछिल्लो केही बर्ष यता उनी रियलमा उत्कृष्ट फर्ममा देखिँदै आएका छन् । उनले च्याम्पियन्स लिगको फाइनमा लिभरपुल विरुद्ध सुरुवाती गोल गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट फर्ममा रहँदा पनि फ्रान्सले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा फिर्ता बोलाएन ।
सेन्टर स्ट्राइकरः पिएरे एमेरिक ओबमेयाङः (आर्सन, गबोन)
गबोनका स्टार एमेरिक रसिया विश्वकपमा देखिने छैनन् । किनकी उनको टिम विश्वकपमा छनौट हुन सकेन । आफ्नो समुहमा गबोन तेस्रो भएको थियो । जुन समुहबाट मोरक्को पहिलो हुँदै रसिया विश्वकपको टिकट पक्का गरेको थियो । एमेरिक जनवरीमा ५५ मिलियन पाउण्डमा बोरुसिया डर्टमन्डबाट आर्सनलमा अनुबन्धित भएका थिए । उनले १३ प्रिमियर लिग खेल्दै १० गोल गरे ।
गियानुल्गी डोन्नरुमा (एसी मिलान, इटाली)
एमेरिक लापोर्ट (म्यानचेस्टर सिटी, फ्रान्स)
एलेक्स सान्ड्रो (युभेन्सट, ब्राजील)
डेभिड लुइस, (चेल्सी, ब्राजिल)
ड्यानी आल्भेस, (पिएसजी, ब्राजिल)
राधा नाइंगगोलन (रोमा, बेल्जियम)
मिलेरम पन्जिक (युभेन्टस, बासिनिया हर्जेगोभिना)
एलेक्सेस सान्चेस (म्यानचेस्टर युनाइटेड, चिली)
माउरो इकार्डी (इन्टर मिलान, अर्जेन्टिना)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा कैद सजाय काटिरहेकी एक महिलालाई दिए क्षमादान